Waxaan Go'aan Ku Gaadhay In Aan Baxo-Antoine Griezmann Oo Ku Dhawaaqay In Uu Atletico Madrid Ka Tagayo Iyo Barca Oo Warkii Ugu Fiicnaa Heshay. - Gool24.Net
Waxaan Go’aan Ku Gaadhay In Aan Baxo-Antoine Griezmann Oo Ku Dhawaaqay In Uu Atletico Madrid Ka Tagayo Iyo Barca Oo Warkii Ugu Fiicnaa Heshay.
Antoine Greizmann ayaa u ciyaari doona Atletico Madrid Sabtida kulankiisii ugu danbeysay ka dib markii uu xaqiijiyay inuu ka tagayo kooxda xagaagan, isagoo ku dhow inuu ku biiro Barcelona.
Weeraryahanka Faransiiska ayaa kulan uu qaatay tababara Diego Simeone iyo madaxweynaha kooxda Miguel Angel Gil Marin waxa uu ku sheegay go’aankiisa uu uga tagayo Atletico iyadoo wax walba ay tilmaamayaan in Griezmann uu ku biirayo Barcelona.
Waxaa xusuusin mudan in lacagta lagu burburin karo qandaraas Griezmann ay waqti xaadirkaan tahay 200 milyan euro ka dib markii uu qandaraas cusub u saxiixay Atletico xagaagii hore.
Si kastab lacagtaas ayaa hoos u soo dhaceysa islamarkaana noqoneysa 120 milyan euro marka la gaaro 1da bisha July. Sidaasi darteed Atletico Madrid waxa ay heshiiska ku heli doontaa 96 milyan euro halka Real Sociedad ay heli doonto boqolkiiba 20 lacagtaas sidaasi darteed Real Sociedad waxa ay qaadan doontaa 24ta milyan euro ee soo hartay.
Maalmihii ugu danbeeyay tababare Simeone ayaa sheegaay in Griezmann uu doonayo inuu baaqi ku sii ahaa kooxda, sidaasi oo ay tahay bixitaankiisa ayaa aheyd wax laga baqayaya. Sidaasi dateed halkii uu jahwareer dhici lahaa si la mid ah xagaagii hore, madaxada Atletico ayaa dooneysay inay maqlaan go’aanka Griezmann haddii uu joogayo iyo hadii kaleba.
Xiddiga ku guuleystay Koobka Adduunka ayaa si daacad ah u hadlay kulankii uu la qaatay madaxda Atletico isagoo u sheegay inuu doonayo inuu baxo. Waxa uu kooxda uga mahadceliyay jaceylkii uu ka helay tan iyo markii uu uga soo biiray Real Sociedad sannadii 2014.
Inta uu Griezmann wadahadal kula jiro Barcelona, Atletico waxa ay xagaagan isku dayi doontaa inay hesho bedelka xiddigeeda Faransiiska.
Muuqaal uu soo duubay Griezmann ayuu ku xaqiijiyay inuu baxayo halka uu sidoo kale u mahadceliyay taageerayaasha.
“Shan sanno oo cajiib ah ayay aheyd, aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin wax walba, qalbiga ayaan idinku heyn doonaa” ayuu Griezmann ku yiri muuqaalka oo lagu baahiyay bogga Twitter ee Atletico Madrid.
“Waxaan doonayaa inaan idiin sheego inaan go’aan ku gaaray inaan baxo, inaan wajaho waxyaabo cusub iyo tartan cusub.
“Aad ayaan idiin kugu mahadcelinayaan, waana is arki doonaa mar kale.”